प्रधानमन्त्री ओलीको अयोध्या तीरले मोदीको राजनीति ह’ल्लियो ! | सुदुरपश्चिम खबर
प्रधानमन्त्री ओलीको अयोध्या तीरले मोदीको राजनीति ह’ल्लियो !
हम्रो अभियान डटकम बाट सभार
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अयोध्या अभिव्यक्ति वि’वादमा परिरहेको छ । गत सोमबार २०७औं भानुजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्या पर्साको ठोरीमा पर्ने वि’वादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतमा भएको अयोध्या न’क्कली भएको भन्दै उनले ठोरीकै सक्कली अयोध्या भएको बताए।
यस अभिव्यक्तिले नेपालमाभन्दा बढी भारतमा बहस भइरहेको छ । अयोध्याबारे भारतमा वर्षाैंदेखि वि’वाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सक्कली अयोध्या नेपालमै रहेको बताएपछि हिन्दूस्थान तातेको छ । भारतमा अयोध्या प्रकरणलाई राजनीतिक विषय बनाइएको छ। सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले ‘जय श्री राम’ भन्ने गरेका छन् । अयोध्याको विषय भारतको न्यायालयमा समेत पुगेको छ।
भ’त्काइएको बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान नै रामको मन्दिर भएको भन्दै भारतीय सर्वाेच्च अदालतले गत नोभेम्बरमा सो स्थान हिन्दूहरुलाई दिइने फैसला सुनाएको थियो । सन् १९९२ मा मस्जिद भ’त्काइएको एक दशकपछि सन् २००२ मा उक्त वि’वाद इलाहाबाद उच्च न्यायाल हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको हो।
गत नोभेम्बरमा सर्वाेच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशहरूको इजलासले गरेको सर्वसम्मत फैसलामा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणको एउटा प्रतिवेदनले राम मन्दिरको अवशेष भ’त्काइएको बाबरी मस्जिदमुनि भेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, भारतमा अयोध्याको विषयलाई लिएर हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीबीच वि’वाद रहँदै आएको छ । हिन्दूवादी मानिने भारतीय संस्थापन भाजपाले सोही मु’द्दा बोकेर सत्तामा पुगेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्तिले भारतीय समकक्षीको धार्मिक राजनीतिमा दख्खल दिएको विश्लेषण गरिन थालेको छ । भारतसँगको कुनै पनि वि’वाद कूटनीतिकमार्फत समाधान खोज्न चाहने नेपाललाई भारतीय सरकारले नटेरेको गत नोभेम्बर २ र मे ८ को घ’टनाले पुष्टि गरेको छ।
२०७२ जेठ १ गते नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने गरी व्यापार सम्झौता गरेका चीन र भारतलाई नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वि’रोध जनाएको थियो । यसपछि गत नोभेम्बरमा सोही भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेको थियो । तत् पश्चात नेपालले बारम्बार वार्ताका लागि पहल गर्दा बेवास्ता गरेको भारतले मे ८ मा सोही क्षेत्र भएर चीनको मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गर्‍यो । यी घ’टनाले ओलीले सरकारले भारतले कूटनीतिक माध्यमलाई ल’त्यार पेलेर अघि बढ्न खोजेको आन्तरिक विश्लेषण गर्दै सोहीअनुसार नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गरिएको हो।
नक्सा जारी गरेपछि रु’ष्ट रहेको भारतको संस्थापन पक्षले ओली सरकार ढाल्न’ लागेको स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । जस कारण मोदीको राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको अयोध्यामा ओलीले भानुजयन्तीको दिन तीर प्रहार गरेर हिन्दुस्थानको राजनीतिलाई ह’ल्लाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले नेपालमा अयोध्याबारे खोजिन थालिएको छ । तर, भारतमा अयोध्या कहाँ हो भन्नेमा तात्तातो बहस सृजना गराएको छ । जसको मोदी सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यो खबर हाम्रो अभियान डटकममा छ